Fanatrehana ny lamesa hotarihin’ny papa François: dimy hetsy ireo mpino handeha an-tongotra ho eny Soamandrakizay | NewsMada
Fanatrehana ny lamesa hotarihin’ny papa François: dimy hetsy ireo mpino handeha an-tongotra ho eny Soamandrakizay
Par Taratra sur 05/09/2019
Hisoratra eo amin’ny tantaran’ny firenena sy ny kristianina ary ny tsirairay ny fitsidihan’ny papa François eto amintsika, manomboka rahampitso. Hanamarika izany ny dian-tongotra hataon’ireo mpino maherin’ny dimy hetsy hihazo ny eny Soamandrakizay, ny alahady izao.
Namoaka ny ampahan’ny antontanisa eo an-tanany ny eo anivon’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana (ATT), amin’izao fitsidihana ataon’ny Ray masina eto amintsika. « Maherin’ny dimy hetsy ireo mpino kristianina hanao diabe avy eto amin’ireo paroasy manodidina an’Antananarivo… Hiainga amin’ny toerana samihafa izy ireo hamonjy ny Sorona Masina hotarihin’ny papa François », hoy ny tompon’andraikitra. Maherin’ny valo hetsy kosa ireo kristianina rehetra ho tonga eny an-toerana miaraka amin’ireo avy any amin’ny diosezy hafa. Nitondrany fanazavana antsipiriany avy eo fa maherin’ny 3 000 ireo fiara hiditra an’Antananarivo avy any amin’ny diosezy ivelan’Antananarivo ary tafakatra 5 559 izany miaraka amin’ireo avy eto amin’ny diosezin’Antananarivo. « Antony nandraisana fepetra izany fahamaroan’ny fiara izany mba hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva ny zoma ka hatramin’ny 5 ora maraina ny asabotsy ny fidiran’izy ireo ny Renivohitra », hoy ihany izy ireo.
Fidirana amin’ireo vavahady…
Etsy an-daniny, tsiahivina ireo toromarika rehetra avy amin’ny mpitandro filaminana sy ny eo anivon’ny fiangonana katolika, ho an’ireo hiatrika ny lamesa eny Soamandrakizay. « Aoka mba hanaja ny toromarika omen’ny mpandrindra ny tsirairay isika », hoy izy ireo. Misy varavarana efatra ny eny an-toerana. Natokana ho an’ny manampahefana ny varavarana iray misy vavahady mena avy aty amin’ny “Parking” ambony. Ho an’ny kristianina hiditra avy any Antanandrano ny vavahady ambony avy any amin’ny ankavanan’ny “Otely”. Natokana hoan’ny fiara mpitondra mpizaika avy any amin’ny faritany, ny fiaran’olontsotra sy ny vahoaka sasany ny varavarana ambany andrefana avy aty amin’ny tanimbary (Route Tsarasaotra). Hoan’i papa François sy ireo mpanotrona azy ny varavarana ambany ankavian’ny “Otely”, ambanin’ny “Nonciature”.
Tsy manatona ny papa François isika…
Tsy tokony hanatona ny papa François isika vahoaka fa afaka manantona antsika izy. Resaka fitandroana filaminana izany. Aoka mba asiana laharan-telefaonin’ny ray amandreny any anaty paosin’ny zaza mba hanamora ny fikaroana raha very sy tsy hita. Tokony hatao anaty “sachet plastique” mangarahara ny lovia misy ny sakafo.. mba hanamora ny fisavana. Hentitra ny mpitandro filaminana amin’ny fivoahana. “Tsy hifanosika rehefa miditra. Miandry ny toromarika kosa vao afaka mivoaka ny kianja rehefa lasa ny papa François, aorian’ny lamesa”, hoy izy ireo. Manampy ireo ny hitandroana ny fahadiovana. Fadiana ny manary fako ao anaty WC. Ny fitondrana “bonbon” tsentsafina mba hiarovana ny fahalemena tampoka. Mitondra satroka sy rano anaty tavoahangy plastika ary fanafody ho an’ireo taizan’aretina. Samy mitondra lamba ipetrahana fa tsy misy seza sahaza ho an’ireo tonga eny an-toerana.
Tonga mialoha ny amin’ny 8 ora avokoa…
Pihina ny elo rehefa tonga eo amin’ny fanamasinana ny “eokaristia Masina”. Tsy azo raisina amin’y tanana ny “vatan’i Kristy Eokaristia” fa amin’ny vava. Tsy maintsy efa eny an-toerana avokoa ny mpizaika ary tsy mahazo mandehaleha, ora roa (amin’ny 8 ora) mialoha ny lamesa. Raha tsy misy ny fiovany, tsy mifandray tanana tahaka ny mahazatra ny rehefa tonga eo amin’ny fanomezam-piadanana fa mifampiarahaba sy mifandray tanana fotsiny no sady miteny hoe : “Fiadanan’i Kristy”…